ACCA (Association of Chartered Certified Accountant, UK) – Bizfix
ACCA ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့် ACCA ကို တက်သင့်လဲ?
ACCA ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ စာရင်းပညာရှင်အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ACCA Qualification နဲ့သာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာမက နိုင်ငံခြားတွေမှာပါ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ အရမ်းလွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ACCA Qualification က ပညာရှင်အဆင့်ဖြစ်တာကြောင့် သင့်တော်တဲ့ အချိန်၊ လုံလ၀ီရိယတော့ စိုက်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ စာရင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ က သင့်အိပ်မက်ဆိုရင် အဲဒီအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ MAS Education Center ကနေ ကူညီပေးနေပါတယ်။
ACCA ကို ဘယ်သူတွေ တက်ရောက်နိုင်လဲ?
ACCA(UK) ဘာသာရပ်များကို တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများနှင့် LCCI Level (III) ပြီးဆုံးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ACCA(UK) ဘာသာရပ်များအား တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ် မတက်ရောက်ရ သေးသော ကျောင်းသား/ သူများ အနေနှင့် တက်ရောက်သင်ကြားလိုပါက LCCI Level (III) Diploma ရရှိထားခြင်း ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ACCA(UK) ၏ Knowledge Module မှ FAB, FMA, FFA ဘာသာရပ် (၃) ခု ကို စတင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ACCA ပြီးမြောက်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ စုစုပေါင်း (၁၃) ဘာသာနှင့် Professional Ethics Module ဖြေဆို အောင်မြင်ရပါမည်။
ACCA မှာ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားလေ့လာခွင့်ရမှာလဲ? ဘယ်နှစ်ဘာသာရှိလဲ?
ACCA မှာ Level 3ခု ရှိပါပြီး စုစုပေါင်း (၁၃)ဘာသာရှိပါတယ်။
1.ပထမဆုံး ဖြစ်တဲ့ Knowledge level မှာ (၃)ဘာသာ ပါရှိပြီး၊ ဖြေဆိုအောင်မြင်သွားပါက Diploma in Accounting and Business ကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာတွေက
F1 AB – Accounting in Business
ဒီLevel ကိုတော့ ၂လအပြတ် (Revision Course), 3လအပြတ် (Intensive Course) ဆိုပြီး သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ စာမေးပွဲကိုတော့ လစဉ်ဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။
2. ဒုတိယအဆင့် ဖြစ်တဲ့ Skill level မှာ (၆)ဘာသာ ပါရှိပြီး၊ ဖြေဆိုအောင်မြင်သွားပါက Advance Diploma in Accounting and Business ကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာတွေက
F4 LW – Corporate and Business Law
F7 FR – Financial Reporting
F8 AA – Audit and Assurance
ဒီ Skill Level ကိုတော့ 3လအပြတ် (Revision Course) နှင့် ၅လအပြတ် (Regular course) ဆိုပြီး သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ စာမေးပွဲကိုတော့ နှစ်စဉ် Mar, Jun, Sep and Dec မှာဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။
3. တတိယအဆင့် ဖြစ်တဲ့ Strategic Professional level မှာ Essentials Module မှ (၂) ဘာသာနှင့် Optional Moduleမှ (၂)ဘာသာ၊ စုစုပေါင်း (၄)ဘာသာကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး၊ အောင်မြင်သွားရင် ACCA Affiliate status ကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာတွေက
Essential Papers (all papers)
P1&3 SBL – Strategic Business Leader
P2 SBR – Strategic Business Reporting
Optional Papers (Choose any two)
P7 AAA – Advanced Audit and Assurance
ACCA လေ့လာပြီးမြောက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲ?
ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး အချိန်ကတော့ ၂နှစ်ခွဲကနေ ၄နှစ်လောက် အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ACCA Fundamental Level –9Papers အား ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး၍ အောက်ပါ အချက်အ လက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက Oxford Brookes University(UK) မှ ပေးအပ်သော B.Sc (Hons) Degree in Applied Accounting ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ACCA Part I (၃)ဘာသာပြီးဆုံးပြီး F7, F8, F9 မဖြေဆိုမှီ သတ်မှတ်ထားသော English Level Certificate (eg. IELTS 6.5 မှတ်က ACCA သို့ တင်သွင်းပြီး B.Sc Programmer ရယူလိုကြောင်း ရွေးချယ်ထားရပါမည်။
Fundamental Level Paper 9ဘာသာကို အောင်မြင်ပြီးပါက ACCA ၏ Professional Ethics Module ကို ဖြေဆိုပြီး စာလုံးရေ (7,500) ပါရှိသော Research & Analysis Project ကို Oxford Brookes University သို့ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်/
မိမိရရှိထားသော ဘွဲ့မှ Exemption ရသော Paper များမှာ LW, FR, AA, FM တို့ ဖြစ်ပါက Exemption မယူကြောင်း ACCA သို့ ကြောင်းကြားရမည်။
ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူများ၊ LCCI Level (III) Diploma ရရှိပြီး သူများ နှင့် Accounting Course တစ်ခုခု ပြီးဆုံးပြီး Accounting Fields တွင် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် လုပ်ကိုင်ပြီးသော သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Dip IFR တွင် Financial Reporting တွင် မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သော IAS နှင့် IFRS များကို သင်ကြားလေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။
ဒီ ဘာသာရပ်ကိုတော့ 3လအပြတ် (Revision Course) နှင့် ၅လအပြတ် (Regular course) ဆိုပြီး သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ စာမေးပွဲကိုတော့ နှစ်စဉ် Mar, Jun, Sep and Dec မှာဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။
ACCA အတွက် Exemption လျှောက်ထားနိုင်သော ဘာသာရပ်များမှာ
Education Qualification Exempted Papers
B.Com AB, MA, FA, LW
Dip in Accounting (DA Myanmar) MA, FA
BA (Eco), BA(BM), B.Ecom(Eco), BBM AB
MBA AB, MA, FA
Registration Fees, Annual Fees သွင်းခြင်း
ACCA Registration Fees မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် register လုပ်သောအခါတွင် တစ်ကြိမ်သာ သွင်းရန်လိုပါသည်။
ACCA Annual Fees ကိုမူ နှစ်စဉ် ပေးသွင်းရပါမည်။ Annual Fees ကို နှစ်စဉ် January 31 ရက်တွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ACCA နှင့် Dip IFR Registration ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ
Passport size Colour Photo (၂) ပုံ
မှတ်ပုံတင် Notry မိတ္တူ (၂) စုံ
ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူ (၂) စုံ
ဘွဲ့လက်မှတ် Notry မိတ္တူ (၂) စုံ
ဘွဲ့မရသေးသော ကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် မိတ္တူ (၂) စုံ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် Notry မိတ္တူ (၂) စုံ (သို့မဟုတ်)
တက္ကသိုလ်တက်ကြောင်း ထောက်ခံစာ မိတ္တူ (၂) စုံ
တက္ကသိုလ်တက်ကြောင်း ထောက်ခံစာ Notry မိတ္တူ (၂) စုံ
Accounting နှင့် ပတ်သက်၍ Certificate/ Diploma မိတ္တူ (၂) စုံ
Other Certificate မိတ္တူ (၂) စုံ
Exemption လျှောက်မည့်သူများ တက္ကသိုလ် First Year to Final အမှတ်စာရင်း မိတ္တူ (၂) စုံ
Dip IFR Registration လုပ်မည့်သူများ Accounting Field တွင် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် ရှိကြောင်း ထောက်ခံစာ မိတ္တူ (၂) စုံ ပေးရပါမည်။
(6) လ အတွင်း ပြန်ထားသော Notry များသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်အမှတ်စာရင်းများ မြန်မာလို ဖြစ်နေပါက Notry ပြန်ပေးရပါမည်။
ဘွဲ့လက်မှတ်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ပါသော်လည်း Notry ပြန်ပေးရပါမည်။